Asa soratra sy fanabeazana :: Nivoaka ny boky « Tohan-kevitra » ho an’ny kilasy famaranana • AoRaha
Asa soratra sy fanabeazana Nivoaka ny boky « Tohan-kevitra » ho an’ny kilasy famaranana
Efa tazana eny amin’ ireo fivarotam-boky samihafa eto an-drenivohitra ny boky « Tohan-kevitra » ho an’ireo mpianatra amin’ny taona famaranana. Vokatra miavaka izy io noho ny fiarahan’ny tontolon’ny kolon­tsaina sy ny fanabeazana ao anatin’ireo takelaka mandrafitra ny boky. Herimanjaka Tsilavo Manantsoa sy i Ammi Ratsimandresiarisoa Sarah no nanangona ireo tohan-kevitra izay velabelarina ao amin’ireo pejy miisa enimpolo ahitana lohahevitra maro. Voaresaka avokoa na ny fanahy, ny razana, ny olombelona sy ny fifan­draisany, ny marina, ny rariny, ny hitsiny, ny tsiny, ny anjara, ny vintana, ny tendry, ny Andriamanitra-Zanahary, ny haisoratra amin’ny ankapobeny, ny kanto ao amin’ny haisoratra….
Mifototra amin’ireny lohahevitra ireny ny fanohanana (ohabolana, fomba fiteny, fehezanteny, fanambarana nataona mpikaroka na mpanoratra…) azon’ny mpianatra ampiasaina amin’izay hevitra tiany hambara. Anisan’ny voarakitra ao, ohatra, ny aingam-panahin-dry ED Andriamalala sy Clarisse Ratsifandrihamanana milaza ny momba ny fanahy.
“Farafahakeliny, tsy maintsy mikaroka izay hahaizana mampiasa ireo teny ireo hoentiny mandrafi-kevitra ny mpianatra mba tsy ho boloky ihomehezan’ny sasany…”, hoy i Irako Andriamahazosoa Ammi, ao amin’ny teny fanolorana ny boky.
Fizahantany Mitohy ny « Dian-tanana » ho fitiavana ny kolontsaina
Ivon-kolo mitety vazatany Nahazo fampianarana roa sosona ireo ankizy teny Ambohimangakely
Vonjy aina :: Manana tahirin-dra mahavita telo andro ny hopitaly HJRA